लगानीकर्ताले लगानी गर्दा गर्ने केहि गल्तिहरु र ती गल्तीहरूबाट बच्न तथा पोर्टफोलियोलाई ट्र्याकमा राख्नको लागि अपनाउने उपायहरु निम्न रहेका छन् |
लगानी गर्दा गर्ने केहि गल्तिहरु:
१) कहाँ लगानी गर्ने नबुझ्नु :
संसारका सबैभन्दा सफल लगानीकर्ताहरू मध्ये एक, वारेन बफेट, तपाईंले नबुझेका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न चेतावनी दिन्छन्। यसबाट बच्ने उत्तम तरिका भनेको म्युचुअल फण्डको विविध पोर्टफोलियो निर्माण गर्नु हो। यदि तपाईंले व्यक्तिगत स्टकहरूमा लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईंले लगानी गर्नु अघि ती स्टकहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक कम्पनीलाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
२) एक कम्पनी संग प्रेम मा पतन :
प्रायः, हामीले लगानी गरेको कम्पनीले राम्रो गरेको देख्दा, त्यसको मायामा पर्न र हामीले लगानीको रूपमा स्टक किनेका हौँ भनेर बिर्सन सजिलो हुन्छ। सधैं सम्झनुहोस्, तपाईंले पैसा कमाउनको लागि यो स्टक किन्नुभएको हो। यदि तपाईंलाई कम्पनीमा खरिद गर्न प्रेरित गर्ने कुनै पनि आधारभूत कुराहरू परिवर्तन भएमा तत्काल स्टक बेच्ने विचार गर्नुहोस्।
३) धैर्यताको कमी
पोर्टफोलियो वृद्धिको लागि एक ढिलो र स्थिर दृष्टिकोणले लामो अवधिमा बढी प्रतिफल दिनेछ। पोर्टफोलियोले के गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो बाहेक अरू केहि गर्ने अपेक्षा गर्नु विपत्तिको लागि निम्तो दिनु हो। यसको मतलब तपाईंले पोर्टफोलियो वृद्धि र रिटर्नको लागि टाइमलाइनको सन्दर्भमा आफ्नो अपेक्षाहरू यथार्थवादी राख्न आवश्यक छ।
४) धेरै लगानीको कारोबार :
टर्नओभर, वा स्थिति भित्र र बाहिर जम्प, अर्को फिर्ती हत्यारा हो। जबसम्म तपाईं कम कमिसन दरहरूको फाइदाको साथ संस्थागत लगानीकर्ता हुनुहुन्न, लेनदेन लागतहरूले तपाईंलाई जिउँदै खान सक्छ | छोटो अवधिको कर दरहरू र अन्य समझदार लगानीहरूको दीर्घकालीन लाभहरूमा हराउने अवसर लागत उल्लेख नगर्नुहोस्।
५) बजारलाई लामो समय दिने प्रयास :
धेरै समय दिन प्रयास गर्दा बजारले रिटर्न पनि मार्छ। सफलतापूर्वक बजारलाई लामो समय दिन धेरै गाह्रो पर्न जान्छ। संस्थागत लगानीकर्ताहरू पनि यसलाई सफलतापूर्वक समय दिन असफल हुन्छन्। ग्यारी पी. ब्रिन्सन, एल. रान्डोल्फ हुड, र गिल्बर्ट एल. बीबोवर द्वारा संचालित “Determinants Of Portfolio Performance” (Financial Analysts Journal, 1986) एक प्रसिद्ध अध्ययनले अमेरिकी पेन्सन कोष रिटर्नलाई कभर गर्दा अध्ययनले देखाएको छ कि, औसतमा, समयको साथमा रिटर्नको भिन्नताको लगभग ९४% लगानी नीति निर्णयद्वारा व्याख्या गरिएको थियो। यसको मतलब यो हो कि पोर्टफोलियोको फिर्ताको धेरै जसो तपाईंले गर्नुहुने सम्पत्ति विनियोजन निर्णयहरूद्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ, समय वा सुरक्षा चयन द्वारा होइन।
६) इभन प्राप्त गर्न प्रतिक्षा गर्दा :
इभन प्राप्त गर्नु भनेको तपाईंले जम्मा गरेको कुनै पनि नाफा गुमाउनु सुनिश्चित गर्ने अर्को तरिका हो। यसको मतलब यो हो कि तपाईले घाटामा गएको कम्पनी बेच्नको लागि पर्खिरहनु भएको छ जब सम्म त्यसको मूल लागत आधारमा फिर्ता हुँदैन। व्यवहार वित्तले यसलाई “संज्ञानात्मक त्रुटि” भनिन्छ। घाटा महसुस गर्न असफल हुँदा, लगानीकर्ताहरूले वास्तवमा दुई तरिकामा हानि गरिरहेका हुन्छन्। पहिलो, तिनीहरूले हारेको बेच्नबाट जोगिन्छन्, जुन बेकार नभएसम्म स्लाइड हुन सक्छ र दोस्रो, ती लगानी रकमहरुको राम्रो प्रयोगको अवसर लागत छ।
७) विविधीकरण गर्न असफल हुनु :
व्यावसायिक लगानीकर्ताहरूले केही केन्द्रित स्थानहरूमा लगानी गरेर अल्फा (वा बेन्चमार्कमा थप प्रतिफल) उत्पन्न गर्न सक्षम हुन सक्छन्, तर साधारण लगानीकर्ताहरूले त्यो प्रयास गर्नु हुँदैन। विविधीकरणको सिद्धान्तमा अडिग रहनु बुद्धिमानी हुन्छ। म्युचुअल फन्ड पोर्टफोलियो निर्माण गर्दा सबै प्रमुख स्थानहरूमा एक्सपोजर आवंटित(allocate) गर्न महत्त्वपूर्ण छ। व्यक्तिगत स्टक पोर्टफोलियो निर्माण गर्दा, सबै प्रमुख क्षेत्रहरू समावेश गर्नु पर्दछ। थम्बको सामान्य नियमको रूपमा, कुनै पनि लगानीमा ५% देखि १०% भन्दा बढी आवंटित नगर्नुहोस्।
८) आफ्नो भावनालाई हावी हुन दिनु :
सायद लगानी फिर्ता हुनुको नम्बर एक हत्यारा भावना हो। डर र लोभले बजारमा शासन गर्छ भन्ने मान्यता सत्य हो। लगानीकर्ताहरूले डर वा लोभले आफ्ना निर्णयहरू नियन्त्रण गर्न दिनु हुँदैन। बरु, तिनीहरूले ठूलो तस्वीर मा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। स्टक मार्केट रिटर्न छोटो समय फ्रेम मा जंगली रूप देखि विचलित हुन सक्छ तर लामो अवधिमा ऐतिहासिक फिर्ताहरु रोगी लगानीकर्ताहरु को पक्षमा हुन्छन्।
भावनाले शासन गरेको लगानीकर्ताले यस प्रकारको नकारात्मक फिर्ता र आतंक बेचेको देख्न सक्छन्, जब वास्तवमा उनीहरूले लामो अवधिको लागि लगानी होल्ड गर्नु राम्रो हुन्थ्यो। वास्तवमा, बिरामी लगानीकर्ताहरूले अन्य लगानीकर्ताहरूको तर्कहीन निर्णयबाट फाइदा लिन सक्छन्।
यी गल्तीहरूबाट कसरी बच्ने ?
यी सामान्य गल्तीहरूबाट बच्न र पोर्टफोलियोलाई ट्र्याकमा राख्नको लागि केही तरिकाहरू यस प्रकारका छन्।
१) कार्य योजना विकास गर्नुहोस् :
तपाईं लगानी जीवन चक्रमा कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईंको लक्ष्यहरू के हुन् र त्यहाँ पुग्न तपाईंले कति लगानी गर्नुपर्छ भनेर सक्रिय रूपमा निर्धारण गर्नुहोस्। यदि तपाईं यति गर्न योग्य महसुस गर्न सक्नुहुन्न भने एक सम्मानित वित्तीय योजनाकार खोज्नुहोस्।
साथै, याद गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो पैसा किन लगानी गरिरहनुभएको छ, र तपाईं थप बचत गर्न प्रेरित हुनुहुनेछ र तपाईंको पोर्टफोलियोको लागि सही आवंटन (allocation) निर्धारण गर्न सजिलो पाउन सक्नुहुन्छ। ऐतिहासिक बजार रिटर्नमा तपाइँको अपेक्षाहरू टेम्पर गर्नुहोस्। तपाईंको पोर्टफोलियोले तपाईंलाई रातारात धनी बनाउने आशा नगर्नुहोस्। समयसँगै एक सुसंगत, दीर्घकालीन लगानी रणनीतिले सम्पत्ति निर्माण गर्नेछ।
२) आफ्नो योजना स्वचालित मा राख्नुहोस् :
तपाईंको आम्दानी बढ्दै जाँदा तपाईं अझै लगानी थप्न चाहनु हुनेछ। आफ्नो लगानी निगरानी गर्नुहोस्। प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा, आफ्नो लगानी र तिनीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्नुहोस्।
३) केहि “रमाइलो” पैसा आवंटित गर्नुहोस् :
हामी सबैलाई कहिलेकाहीं पैसा खर्च गर्ने आवश्यकताबाट प्रलोभन हुन्छ। यो मानव अवस्था को प्रकृति हो। त्यसोभए, यसलाई लड्ने प्रयास गर्नुको सट्टा यसको साथ जानुहोस्। “रमाइलो लगानी रकम” अलग गर्नुहोस्, तपाईंले यो रकम आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोको ५% भन्दा बढीमा सीमित गर्नुपर्छ, र यो तपाईंले गुमाउन सक्ने पैसा हुनुपर्छ। सेवानिवृत्ति पैसा प्रयोग नगर्नुहोस्। सधैं प्रतिष्ठित वित्तीय फर्मबाट लगानी खोज्नुहोस्।
गल्तीहरू लगानी प्रक्रियाको भाग हुन्। तिनीहरू के हुन्, तपाईंले उनीहरूलाई प्रतिबद्ध गर्दा र तिनीहरूलाई कसरी बच्ने भन्ने कुरा थाहा पाउँदा तपाईंलाई लगानीकर्ताको रूपमा सफल हुन मद्दत गर्नेछ। माथिका गल्तीहरू गर्नबाट बच्नको लागि, एक विचारशील, व्यवस्थित योजना विकास गर्नुहोस् र त्यसमा अडिग रहनुहोस्। यदि तपाईंले केहि जोखिमपूर्ण काम गर्नु पर्छ भने केहि रमाइलो पैसा छुटाउनुहोस् जुन तपाईं हराउन पूर्ण रूपमा तयार हुनुहुन्छ। यी दिशानिर्देशहरू पालना गर्नुहोस् र तपाईं पोर्टफोलियो निर्माण गर्ने बाटोमा राम्रोसँग हुनुहुनेछ जसले लामो अवधिमा धेरै खुसी प्रतिफलहरू प्रदान गर्दछ।